Inkampani | Julayi 2021
Izindaba Cindezela Umphakathi Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Umphakathi, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Imininingwane Yezidakamizwa Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Izindaba Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo
Ukubhaliswa okuvulekile kwe-ACA: Okudingayo ukwazi ngezinhlelo zezempilo ze-2021
Isikhathi sokubhalisa esivulekile se-ACA sehlukahluka kuye ngombuso. Kufanele ubhalise ngesikhathi esinqunyiwe noma ubungozi bokulahlekelwa ukumbozwa kwezempilo kuze kufike ukubhaliswa okuvulekile okulandelayo.
Abathathe umhlalaphansi kufanele bagcine umshuwalense wezempilo ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Hlela izindleko zokunakekelwa kwezempilo lapho usuthathe umhlalaphansi ngokufunda ukuthi yiziphi izinketho ongazithola.
Nazi izinketho ezinhle kakhulu zomshuwalense wezempilo kulabo abazisebenzayo
Ngiyazisebenza? Phequlula izinketho zomshuwalense wezempilo lapha futhi ufunde ukuthi ucabangani ngaphambi kokukhetha uhlelo lomshwalense wezempilo olungcono kakhulu kuwe.
I-SingleCare inokonga kadokotela ngezinkulungwane zemithi. Nayi imishanguzo eyi-10 ongonga kakhulu ngekhadi lethu lesaphulelo somuthi.
I-RxSense iwina umklomelo we-America's Best Startup Employers 2021
I-RxSense iqambe ngomunye wabaqashi abahamba phambili eziqalisweni ezingama-500. Idumela, ukwaneliseka kwabasebenzi, kanye nokukhula kwenkampani kwakuyizindlela zokuthola umklomelo weForbes.
Izidakamizwa ezithandwa kakhulu kuSingleCare ngoMeyi
Ama-beta blockers nemithi ye-thyroid isindisa izimpilo unyaka wonke. Ngakho-ke kungani kunemithi eminingi kadokotela egcwalisa ekupheleni kwenkathi ebandayo neyomkhuhlane? Ochwepheshe bayachaza.
Imithi yomfutho wegazi ophakeme yizidakamizwa ezithandwa kakhulu ezigcwele iSingleCare ngo-Ephreli. Kungani? Abantu abaningi bane-hypertension.
Ngingayisebenzisa i-SingleCare emithini enegama lomkhiqizo?
Imithi ejwayelekile ingaba eshibhile ngama-85% kunegama lomkhiqizo, kepha kwesinye isikhathi i-generic ayitholakali. Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani iSingleCare ukonga imali ngezidakamizwa ezinegama lomkhiqizo.
Kubiza malini ukwelashwa komdlavuza webele e-U.S.
Izindleko zokwelashwa komdlavuza webele zibalelwa ku- $ 20,000 kuya ku- $ 100,000, kepha ziyehluka ngohlobo lokwelashwa nesigaba somdlavuza. Sinciphisa izindleko zomdlavuza bese sikunikeza izindlela ezi-5 zokonga.
Ngingayisebenzisa i-SingleCare uma ngikwi-Medicare?
Ungasebenzisa ikhadi lethu lokonga ekhemisi noma ngabe ufanele izinzuzo ze-Medicare. Akukhona okungekho emthethweni, noma okuphambene nemithetho. Nakhu ukuthi kanjani.
Uyini umshuwalense wezempilo oyinhlekelele?
Uma ungakwazi ukukhokhela umshuwalense wendabuko, kukhona enye inketho: umshuwalense wezempilo oyinhlekelele. Nakhu ukuthi wazi kanjani ukuthi ikulungele yini.
Isikhulu esiphezulu seSingleCare uRick Bates ngokuthi kungani aqala iSingleCare
Isimo sokunakekelwa kwezempilo e-U.S. Siyinkimbinkimbi futhi siyashintsha njalo-okuyilokho iSikhulu Esiphezulu se-SingleCare uRick Bates akhulume ngaso kwi-HealthCare Consumerism Radio.
Yonke imithi ekwiSingleCare ingaphansi kwama- $ 10
Thola imiyalo eyi- $ 10 ngeSingleCare kufaka phakathi ama-antibiotic, imithi yokungezwani komzimba, imishanguzo yegazi, nokuningi. Thola cishe imiyalelo engama-50 eshibhile.
Izindlela zokwelapha ezishibhile ezingama-25 ku-SingleCare
Ufuna imithi eshibhile ye-Rx? Nayi imiyalo eshibhile ongayithola ngamakhuphoni e-SingleCare, amahhala futhi angavuselelwa kukho konke ukugcwaliswa.
Lawa kwakungamakilasi ezidakamizwa ayegcwele kakhulu ku-SingleCare ngo-2020
Yiziphi izinhlobo zemithi abantu baseMelika abayithatha ngo-2020? Ama-antihypertensives, ama-anti-depressants, nama-thyroid agents kwakungezinye zezigaba ezivame kakhulu zezidakamizwa.
Uyini Umthetho Wezinto Ezilawulwayo?
Umthetho Wezinto Ezilawulwayo we-1970 usasebenza futhi ungathinta umuthi wakho. Funda ukuthi ungawugcwalisa kanjani umyalelo wento elawulwayo.
Uyini umehluko phakathi kwesilinganiso esikhokhelwayo nesiphumile ephaketheni?
Umshuwalense ngeke ungene kuze kube uchitha inani elithile ekunakekelweni kwezempilo. Qondisisa okubalulekile maqondana nemali yakho ekhishwayo ekhishelwa ngaphandle nasesikhwameni.
Uyini umehluko phakathi kwe-deductible ne-premium?
Iningi labantu likhetha umshuwalense wezempilo ngokususelwa ku-deductible vs. premium. Kunini lapho kungcono ukuhweba imali ebanjwayo ephezulu nge-premium ephansi futhi okuphambene nalokho?
Izidakamizwa ezithandwa kakhulu kuSingleCare ngo-Agasti
Imiyalo egcwele egcwalisiwe ngo-Agasti yimithi yokwelapha isikhumba yokungezwani nomzimba, induna, nezinye izimo zesikhumba — yingakho ukunakekelwa kwesikhumba ehlobo kushisa kakhulu.
Uyini umehluko phakathi kwe-copay vs. deductible?
Lo mhlahlandlela uzokusiza uqonde masinyane umehluko phakathi kwe-copay vs deductible nokuthi ungazivikela kanjani izindleko ezengeziwe zokunakekelwa kwezempilo.
iyini inzuzo yezempilo ye-apula cider uviniga
ukwenzani ukuphuza uviniga emzimbeni
siyini isithako esiyinhloko ku-allegra
ungayithola kanjani incwadi kadokotela ye-adderall
imiphumela emibi ye-decadron ihlala isikhathi esingakanani